Norwegian Cruise Line na ọdụ ụgbọ mmiri na Jamaica
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Norwegian Cruise Line na ọdụ ụgbọ mmiri na Jamaica
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Mịnịsta njem njem na Jamaica, Edmund Bartlett ekpughere na Jamaica emechaala ndokwa na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ, Norwegian Cruise Line, iji bute otu n'ime ụgbọ mmiri ha na Montego Bay.
A na-amalite ọrụ Norwegian Cruise Line ịmalite na Ọgọstụ 7, 2021.
Onye Minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica mesiri obi ike na usoro ụgbọ mmiri na-agbaso usoro iwu nchekwa COVID-19.
Shipgbọ mmiri, nke nwere ihe ruru 3,800, ga-arụ ọrụ na 50% ikike, na-agbaso usoro iwu COVID-19 ugbu a.
“Obi dị m ụtọ ịkpọsa na Jamaica ga-abụ ọdụ ụgbọ mmiri nke Norwegian Cruise Line, nke ga-ahụ nloghachi nke njem njem njem na mmiri Jamaica na August. Anyị na-ele anya ịnabataghachi ha n’ikpere mmiri anyị, enwekwara m ntụkwasị obi na mmekọrịta a dị mkpa ga-enye aka na mbọ anyị iwughachi mpaghara njem ndị njem anyị ma bulie akụ na ụba anyị niile, ”ka Bartlett kwuru.
“Ọ bụ ezie na anyị maara na e nwere ụfọdụ nsogbu gbasara nchekwa nke ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri n’oge a. Anyị chọrọ ịkwado ọha na eze na ụgbọ mmiri ahụ na-agbaso usoro nchekwa nchekwa COVID-19. Anyị jisiri ike na-arụsi ọrụ ike ịzụlite amụma dị mkpa na usoro dị mkpa, nke ga-ahụ na nke a ga-abụ ahụmịhe, enweghị ntụpọ ma nwee ntụkwasị obi, nke ga-aba uru ọ bụla, "ka ọ gbakwụnyere.
Ọ Joụ nke Norwegian bụ ụgbọ mmiri nke a ga-eji na-ebupụ ndị njem na-esi na ya aga Jamaica, na usoro njegharị ga-agụnye nchịkọta ụbọchị 7 nke ị na-esi na Montego Bay pụta.
“N’ikpeazụ, ụgbọ mmiri ahụ, nke nwere ihe dị ka 3,800, ga-arụ ọrụ na 50% ikike, na-agbaso usoro iwu COVID-19 ugbu a maka ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri. A ga-achọkwa ndị njem ka ha gbaa ọgwụ mgbochi zuru oke ma lee ule tupu ha abanye n'ụgbọ mmiri ahụ, "Minista Bartlett kọwara.
Site na ọkwa a, Jamaica na-esonye ugbu a na ọtụtụ ebe ndị Caribbean ndị ọzọ ga-abụ ebe obibi maka isi ụgbọ mmiri.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. bụ ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na-eduzi mba ụwa nke na-arụ ọtụtụ ụdị, gụnyere Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises na Regent Seven Seas Cruises. Site na mkpokọta ụgbọ mmiri 28 dị mkpụmkpụ 59,150, ụdị ndị a na-enye njem njem karịa ihe karịrị 490 ebe ụwa. Companylọ ọrụ ahụ ga-ewebata ụgbọ mmiri itoolu ọzọ site na 2027.
Ighaghachi njem ụgbọ mmiri na-akpọ na Seychelles